Ahoana ny fomba hialana amin'ny fizaràna amin'ny malalanao?
Voaporofo fa sarotra kokoa ny vehivavy miara-mipetraka amin'ny lehilahy iray, satria izy ireo dia mihasimba kokoa sy malemy fanahy. Ny fomba hialana amin'ny fizarazarana amin'ny lehilahy malalanao - tsy misy toro-hevitra iraisampirenena momba ity lohahevitra ity, fa angamba, misy olona iray hanampy ny tolo-kevitr'ireo izay efa nandalo ity fitsapana ity.
Torohevitra momba ny fomba hialana amin'ny fizaràna amin'ny olon-tianao
Mba hiarahana amin'ny olon-tiany na, mbola ratsy kokoa aza, hajanona - ho an'ny vehivavy dia mahatsiravina. Ny fanehoan-kevitra voalohany amin'ny toe-javatra mahasosotra dia ny manafina, toy ny sifotra, amin'ny "trano" -configuration ary manomboka mihady. Ary, angamba, mandritra ny fotoana fohy dia ilaina izany, fa raha mikaroka ho an'ny tenany manokana ny fikarohana ny fahadisoana dia ilaina ny mandray fepetra maika.
Ny zavatra voalohany tokony hatao, na manao ahoana aza ny fanaintainana, dia ny manaisotra ireo "vavolombelona" amin'ny fitiavanao. Ny saripika miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana mahafinaritra dia mety tsy ho lasa loharanon'ny fihetseham-po mahafinaritra intsony, ary na dia ny olon-tiany amin'ny hoavy aza dia mila azy eo anoloan'ny masony. Noho izany, esory izay rehetra mampahatsiahy anao ny fitiavana tsy mety. Tsy misy alahelo - ao anaty fako, kilalao malefaka ihany no azo omena ny olona any am-pianarana.
Ny dingana manaraka dia ny mameno ny fahabangana izay niseho tamin'ny fialàn'ny lehilahy malala. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fisainan'ny vehivavy: afaka mandeha amin'ny dia ianao, misoratra anarana ho an'ny fitondran-tena, manomboka mianatra fiteny vahiny. Ary aza adino ny mitondra ny tenanao amin'ny fomba mahafinaritra - masajara, fandroana, sns.
Ahoana ny fomba hamahana ny alahelonao amin'ny fisarahana amin'ny olon-tianao?
Na dia eo aza ny fandriam-pahalemana ivelany, ny vehivavy iray rehefa miara-miasa amin'ny vadiny dia halahelo be. Ny vahoaka matanjaka dia tsy maneho ny fihetseham-pony , Na izany aza dia tsy tokony hamela ny fanaintainana ho rava avy ao anatiny.
Ny fomba fitsaboana art fitsikerana dia tsara amin'ity tranga ity. Ny sarin'ny fanaintainana dia mety ho voasariky na hohajambaina, ary avy eo dia rava. Ireo tia mandihy, azonao atao ny manandrana maneho ny fihetseham-ponao amin'ny dihy mihetsiketsika, ary avy eo dia miakatra miaraka amin'ny fiovana izay maneho ny fifohazana.
Ny fomba iray hafa hiatrehana ny fanaintainana dia ny manampy ireo izay mbola ratsy kokoa. Mety ho zaza kamboty, vahiny any amin'ny trano fitaizana ny be antitra, biby maty. Ny fankasitrahany amim-pahatsoram-po no hahatonga ny fanahy mijaly ho balsama fanasitranana tena izy.
Ahoana ny hanadinoana lehilahy iray?
Wedding amin'ny lila lila
Wedding amin'ny fomba retro
Wedding amin'ny ririnina - hevitra
Ahoana no ahafantarana raha miova ny lehilahy?
Ny fahavaratra amin'ny vehivavy 2013
Afobe avy amin'ny mangana sy mangana
Ny pavilions vita amin'ny polycarbonate - safidy manintona
Green manicure - hevitra tsara sy lamaody
Fanondro ny kafe
Miraratra an'i Cuzco
Kitapo fandroana vita amin'ny lakozia
Fanitsiana ny tranon-jaza
Vovobony voninkazo - fampiharana
Homeopathy Mercurius solubilis - famantarana ny fampiasana
Takela-bolamena eo am-baravarana